अभिनेत्री बर्षा शिवाकोटीको सरकारलाई प्रश्न : कोरोना संक्रमित गन्ने मात्रै कि घटाउने पनि - StarPratika.com
अभिनेत्री बर्षा शिवाकोटीको सरकारलाई प्रश्न : कोरोना संक्रमित गन्ने मात्रै कि घटाउने पनि
काठमाडौ । पछिल्लो समय भारतिय मुलुकबाट नेपालीहरु घर फर्किएरहेका छन् । देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन दिने बढेको बढै छ । यस विषयलाई लिएर आम मानिस चिन्तामा परेका छन् । निको हुनेको संख्या भने निकै कम देखिएको छ । यस विषयमा अभिनेत्री बर्षा शिवाकोटी निकै चिन्तित देखिएकी छन् । अभिनत्री बर्षाले लकडाउनको पहिलो हप्तामा नै कोरोना कोषमा दुइ लाख दिएकी थिइन । उनले सरकारलाई प्रश्न गरेकी छन् । के सबै विरामीको उपचार भइरहेको छ । उनीहरुको अर्थात संक्रमितको संख्या गन्दै जाने कि घटाउदै जाने भनेर प्रश्न गरेकी छन् । उनको भनाई जस्ताको त्यस्तै ।
‘कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ । नेपालमा आजसम्म झन्डै ६०० जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । दिनहुुँ दर्जनौको संख्यामा संक्रमित बढ्नुले स्थित भयावह देखिएको छ । यस परिस्थितिप्रति मेरो एउटा जिज्ञासा ( के सबै सङ्क्रमित strictly Isolation मा बस्नु भएको छ त ? के उहाँहरुको उपचार पुर्ण निगरानी र सही ढंगले भई रहेको छ त ? के उहाँहरुको को स्वास्थको जिम्मा र उपचारमा सरकारले बिशेष पहल गरेको छ त ? कि त संmत्रमितको संख्या गन्ने मात्र काम भैरहेको छ ! घटाउने तिर ठोस प्रयास भएको छ त ? ’
अलिसा राई र भिमफेदी गाइजको बबाल’
नरेश खातीको संगीत र रमेश बि जीको रचनामा आयो ‘तिम्रो पिरैमा’ [ भिडियो]
द भ्वाइसका विजेता सिडी विजय अधिकारी को आवाजमा “तिम्रो माया भन्दा मिठो ”(भिडियो सहित )
लक्ष्मी पुरीको तीजको कोसेली ‘ ‘माइतीको आँगन’मा